Avy amin'i Wikipedia, raki-bolana malalaka
Tsy tokony hafangaro amin'ny pirinty lamba.
Screen pirinty dia teknika fanaovana pirinty andraisana ny harato ampiasaina mba hamindra ny substrate ranomainty teo, afa-tsy ao amin'ny faritra natao ho an'ny ranomainty tsy len-drano amin'ny alalan'ny fanakatonana Stencil. Ny vary na squeegee dia nifindra manerana ny efijery mba hameno ny harato misokatra apertures tamin'ny ranomainty anefa, ary tapaka lalan-dra dia ny mifanohitra mahatonga ny efijery mba hikasika ny substrate vetivety eny amin'ny tsipika ny fifandraisana. Izany no mahatonga ny ranomainty mba mandena ny substrate ka nisintona avy tao amin'ny harato apertures toy ny lamba Mipoitra indray taorian'ny efa lasa ny lelan-tsabatra.
Screen fanontam-pirinty ihany koa ny fomba tsy atao pirinty intsony Stencil fanaovana izay dia nametraka ny famolavolana amin'ny lamba na zavatra hafa tsara polyester harato, amin'ny faritra fotsy mifono tamin'ny tsy len-drano-bevava izy. Ranomainty no voatery ho any amin'ny harato misokatra ny voky vary na squeegee sy amin'ny alalan'ny wetting ny substrate, nafindra tao amin'ny fanontam-pirinty nandritra ny squeegee ambonin'ny tapaka lalan-dra. Toy ny lamba fanakonana rebounds lavitra ny substrate ny ranomainty mbola eo amin'ny substrate. Izany dia fantatra koa amin'ny hoe landy-lamba, lamba, PRINTY SIVANINDAMBA LANDY, ary serigraph fanontam-pirinty. Loko iray dia pirinty amin'ny fotoana, ka maro efijery azo ampiasaina hamokarana ny sary miloko isan-karazany na ny famolavolana.
Misy isan-karazany ampiasaina amin'ny teny izay mitovy indrindra teknika. Fomba nentim-paharazana ny fomba fanontam-pirinty atao hoe lamba na landy silkscreen pirinty, satria nampiasaina tao amin'ny dingana mialoha ny famoronana ny polyester harato. Amin'izao fotoana izao, synthetic kofehy dia matetika ampiasaina ao amin'ny efijery dingana fanontam-pirinty. Ny tena malaza amin'ny ankapobeny fampiasana harato na ny fanaka polyester. Misy-fampiasana harato manokana fitaovana ny nylon sy Stainless vy misy ny efijery mpanonta. Misy ihany koa ny isan-karazany ny haben'ny harato izay no hamaritra ny vokatra, ary hijery ny endrika vita amin'ny fitaovana.
Raha mila fanazavana momba ny fanontam-pirinty efijery tantara, masìna ianao, mankanesa any https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_printing
Post fotoana: May-27-2018